रुपन्देही र दाङमा ३१ संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण रुपन्देही र दाङमा ३१ जनाकोे मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र दाङका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै पुगेर अक्सिजनसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन् । पाँच इलेक्ट्रोनिक अक्सिजन तथा दुई ठूलो र आठ साना सिलिण्डरको अक्सिजन पालिकामा उपलब्ध रहेको र थप गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको पालिकाले जनाएको छ । जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय रम्भामा एक, हुँगी तथा रम्भा माध्यमिक विद्यालयमा पाँच र ताँहुमा अक्सिजनसहितको अस्थायी कोभिड– अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
एकैपटक ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [नामावलीसहित] ५ मिनेट पहिले
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? १० मिनेट पहिले
सरकारले भन्यो - १८ गतेपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमितको खर्च व्यहोर्दैनौँ २५ मिनेट पहिले
सरकारले भन्यो - १८ गतेपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमितको खर्च व्यहोर्दैनौँ
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ४७६ संक्रमित, देशभर कु्न जिल्लामा कति ?
नेपालमा थप ४५२२ जनामा कोरोना पुष्टि, ४९५४ संक्रमणमुक्त
बागलुङमा थप दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
कर्णालीमा कोरोनाबाट अहिलेसम्म ३ सय जनाको मृत्यु